Matiu 23 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
23 Mgbe ahụ, Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ na ndị na-eso ụzọ ya,+ sị: 2 “Ndị odeakwụkwọ+ na ndị Farisii anọdụwo n’oche Mozis.+ 3 Ya mere, ihe niile ha na-agwa+ unu, meenụ ha, debekwanụ ha, kama unu emela ihe ha na-eme,+ n’ihi na ha na-ekwu ma ha adịghị eme. 4 Ha na-ekekọta ibu dị arọ ma dọkwasị ha n’ubu ndị mmadụ,+ ma ha onwe ha adịghị achọ iji mkpịsị aka ha rụtụ ha.+ 5 Ha na-arụ ọrụ niile ha na-arụ ka ndị mmadụ hụ ha;+ n’ihi na ha na-eme ka mkpọ̀ a na-etinye akụkụ Akwụkwọ Nsọ+ ụfọdụ ndị ha na-eyi dị ka ihe nchebe bukwuo ibu, na-emekwa ka ọnụ ọnụ uwe ha sakwuo mbara.+ 6 Ọ na-atọ ha ụtọ ịnọ n’ebe kasị ùgwù+ ná nri anyasị nakwa n’oche ihu n’ụlọ nzukọ,+ 7 nakwa ka a na-ekele ha+ n’ọma ahịa, ka ndị mmadụ na-akpọkwa ha Rabaị.+ 8 Ma ka a ghara ịkpọ unu onwe unu Rabaị, n’ihi na otu onye bụ onye ozizi unu,+ ma unu niile bụ ụmụnna. 9 Unu akpọkwala onye ọ bụla nna unu n’elu ụwa, n’ihi na otu onye bụ Nna unu,+ ya bụ, Onye nke eluigwe. 10 Ka a gharakwa ịkpọ unu ‘ndị ndú,’+ n’ihi na Onye Ndú unu bụ otu onye, ya bụ, Kraịst. 11 Ma onye kasị ukwuu n’etiti unu aghaghị ịbụ onye na-ejere unu ozi.+ 12 Onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala,+ onye ọ bụla nke na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu.+ 13 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! n’ihi na unu na-emechi ụzọ+ alaeze eluigwe n’ihu ndị mmadụ; n’ihi na unu+ onwe unu adịghị abanye, unu adịghịkwa ekwe ka ndị chọrọ ịbanye banye. 14* —— 15 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ!+ n’ihi na unu na-agafe oké osimiri na ala akọrọ iji tọghata otu onye, mgbe ọ ghọkwara onye a tọghatara, unu na-eme ka o jiri okpukpu abụọ ghọọ onye a ga-atụba na Gehena* karịa unu. 16 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị ndú kpuru ìsì,+ ndị na-asị, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla ejiri ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ dịghị ihe ọ bụ; ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ejiri ọlaedo dị n’ụlọ nsọ ṅụọ iyi, iwu ji ya.’+ 17 Ndị nzuzu na ndị ìsì! N’ezie, olee nke ka ibe ya, ọ̀ bụ ọlaedo ka ọ̀ bụ ụlọ nsọ ahụ nke mere ka ọlaedo ahụ dị nsọ?+ 18 Unu na-asịkwa, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla ejiri ebe ịchụàjà ṅụọ iyi, ọ dịghị ihe ọ bụ; ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ejiri onyinye dị n’elu ya ṅụọ iyi, iwu ji ya.’ 19 Ndị ìsì! N’ezie, olee nke ka ibe ya, ọ̀ bụ onyinye ka ọ̀ bụ ebe ịchụàjà+ ahụ nke mere ka onyinye ahụ dị nsọ? 20 Ya mere, onye ji ebe ịchụàjà ṅụọ iyi ji ya na ihe niile dị n’elu ya ṅụọ iyi; 21 onye ọ bụla nke ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi jikwa onye ahụ nke bi n’ime ya ṅụọ iyi;+ 22 onye ji eluigwe ṅụọ iyi ji ocheeze Chineke+ na onye ahụ nke nọ n’elu ya ṅụọ iyi. 23 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! n’ihi na unu na-enye otu ụzọ n’ụzọ iri+ nke mkpá akwụkwọ mint nakwa mkpá akwụkwọ dil nakwa mkpụrụ kọmin, ma unu na-eleghara ihe ndị ka mkpa n’Iwu ahụ anya, ya bụ, ikpe ziri ezi+ na ebere+ na ikwesị ntụkwasị obi.+ Ihe ndị a ka iwu ji mmadụ ime, ma ọ bụghị ileghara ihe ndị ọzọ anya. 24 Ndị ndú kpuru ìsì,+ ndị na-azapụ anwụnta+ ma na-eloda kamel!+ 25 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! n’ihi na unu na-eme ka azụ iko+ na efere dị ọcha, ma ime ha jupụtara n’ihe e bukọọrọ n’ike+ na imefe ihe ókè. 26 Ndị Farisii kpuru ìsì,+ burunụ ụzọ mee ka ime iko+ na ime efere dị ọcha, ka azụ ya wee dị ọcha. 27 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ!+ n’ihi na unu yiri ili e tere nzụ,+ bụ́ nke na-eyi ihe mara mma n’elu ma ime ya ejupụta n’ọkpụkpụ nke ndị nwụrụ anwụ nakwa n’ụdị adịghị ọcha ọ bụla. 28 Otú ahụkwa ka unu onwe unu na-eyi ndị ezi omume n’anya ndị mmadụ,+ ma ime unu jupụtara n’ihu abụọ na mmebi iwu. 29 “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ!+ n’ihi na unu na-ewu ili ndị amụma ma na-achọ ili ncheta nke ndị ezi omume mma,+ 30 unu na-asịkwa, ‘Ọ bụrụ na anyị nọ n’ụbọchị nna nna anyị hà, anyị agaghị ekere òkè n’ọbara ndị amụma.’+ 31 Ya mere, unu na-agba àmà megide onwe unu na unu bụ ụmụ nke ndị gburu ndị amụma.+ 32 Ebe ọ dị otú ahụ, meenụ ka ihe ọ̀tụ̀tụ̀ nke nna nna unu hà ju eju.+ 33 “Agwọ, ụmụ ajụala,+ olee otú unu ga-esi gbanahụ ikpe Gehena?+ 34 N’ihi nke a, lee, m na-ezitere+ unu ndị amụma na ndị maara ihe na ndị na-ezi ihe n’ihu ọha.+ Ụfọdụ n’ime ha ka unu ga-egbu,+ kpọgidekwa ha n’osisi, ụfọdụ n’ime ha ka unu ga-apịakwa ihe+ n’ụlọ nzukọ unu, kpagbuokwa ha site n’obodo ruo n’obodo; 35 ka ọbara ezi omume dum a wụfuru n’ụwa wee dị n’isi unu,+ malite n’ọbara onye ezi omume+ bụ́ Ebel+ ruo n’ọbara Zekaraya nwa Barakaya, onye unu gburu n’agbata ebe nsọ na ebe ịchụàjà.+ 36 N’ezie, ana m asị unu, Ihe ndị a niile ga-abịakwasị ọgbọ a.+ 37 “Jeruselem, Jeruselem, nke na-egbu ndị amụma,+ nke na-atụkwa+ ndị e ziteere ya nkume,+—lee ọtụtụ ugboro m chọrọ ịchịkọta ụmụ gị, dị ka nnekwu ọkụkọ si achịkọta ụmụ ya n’okpuru nku ya!+ Ma unu achọghị ya.+ 38 Lee! A hapụworo+ unu ụlọ unu.+ 39 N’ihi na ana m asị unu, unu agaghị ahụ m ma ọlị malite ugbu a ruo mgbe unu ga-asị, ‘Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ nke na-abịa n’aha Jehova bụ!”’+